Antso ny fandroahana: inona izany, ny teny, ny taratasy sy vaovao
Ny antso fandroahana ny ampahany amin’ireo mpiasa, dia ny fomba ny fanoherana ny fepetra noraisin’ny mpampiasa izay maniry izy mba hiala amin’ny fifanekena momba ny asa. Ny antso ho toy ny fandroahana taona, dia zon’ny mpiasa, raha toa ka misy antony hanamarinana ny fandroahana noho ny antony, ny fandroahana noho ny antony na voamarina ny antony famaizana asa na fandroahana amin’ny filazana, toy ny tsy hanapaka ny ankehitriny fitsipika avy amin’ny fomba fijery ny fomba, na satria izany dia avy amin’ny antony mahatonga izany dia ny fanavakavahana, na entina avy ao amin’ny vanim-potoana voaaron’ny lalàna, toy ny fitondrana vohoka sy ny lactation fa tokony ho vita ao anatin’ny fe-potoana voalazan ny Lalàna, eo sazy tsy admissibility ny antso sy ny hetsi-panoherana. Ka andeha hojerentsika inona no vaovao ny teny ho an’ny fitsarana ny fandroahana, mampahatsiahy ihany koa fa ao ny raharaha ny fandroahana involuntary dia omena ny mety hisian’ny fidirana ho any amin’ny olom-pirenena ny vola miditra amin’ny taona.
Ny fandroahana ny mpiasa ny fomba izay ny mpampiasa afaka maka mba hanakana sy maharitra hitsahatra ny asa fifandraisana. Miaraka amin’ity taratasy voasoratra, cd-rom. ny taratasy fandroahana, ny mpampiasa dia manambara amin’ny fomba ofisialy ny mpiasa, ny faniriany hiala amin’ny fifanekena momba ny asa. Miresaka momba ny fametraham-pialàna, tsy maintsy atao ny fisotroan-dronono, na fametraham-pialàna ho an’ny hiteraka fotsiny, rehefa izany dia toy izany koa ny mpiasa sy ny mpiasa amin’ny ankapobeny, mba te-hamarana ny asa fifandraisana amin’ny orinasa na ny mpampiasa. Toy izany ny sampam-pianarana, dia eken’ny rehetra-pirenena fifanarahana iombonana. Amin’ny toe-javatra ireo, ny mpiasa izay nametra-pialana an-tsitrapo tsy manana zo handray ny tsy fananan’asa NASpI. Teny ambony manohitra ny fandroahana no ao anatin’ny fe-potoana izay ny mpiasa dia afaka fifaninanana sy ary avy eo dia fitsarana ambony manohitra ny fanapahan-kevitry ny asany, satria izany dia mifanohitra amin’ny fepetra voalazan’ny Lalàna, ny mpiasa. Teny ambony manohitra ny fandroahana dia enim-polo andro, ny kajy avy ny andro ny fandraisana ny fanaterana ny taratasy fandroahana amin’ny voasoratra amin’ny taratasy voasonia na R. Raha ny antso manohitra ny fandroahana tsy vita ao anatin’ny fe-potoana io, ny mpiasa very ny zo hanohitra ny didy navoaka hamelezana azy ny orinasa, ary avy eo ny antso ho amin’ny asa Fitsarana, noho ny ascertainment ny unlawfulness ny asany sy ny vokatry ny fanamelohana ny mpampiasa handoa onitra. Teny ambony manohitra ny fandroahana ivelan’ny fitsarana, voasoratra taratasy, ao anatin’ny andro, nanome ianao afaka miroso amin ny petra-bola ao amin’ny rejisitry ny Asa Fitsarana, ny fitsarana ambony manohitra ny fanapahan-kevitra. Antso manohitra ny fandroahana amin’ny Asa Asa, ny mikasika ny lalàna vaovao nampiditra D. lgs.
telo amby roapolo, fandroahana ary severance vola, fotoana izao nisafidy ny iray, raha oharina amin’ny make-up, raha ny fandroahana tsy ara-drariny ny mpiasa miasa amin’ny maharitra fototry ny fifanekena fiarovana tsy mitsaha-mitombo, manomboka amin’ny fito eo amin’ny martsa. Araka ny asa Asa, noho izany, ny mpiasa izay nampidirina niasa voalohany ny fito volana martsa, mbola mampihatra ny fepetra art. valo ambin’ny folo ny Mpiasa ny Lalàna, na ireo nokaramaina rehefa afaka izany, dia ampiharo ny lalàna vaovao momba ny onitra ara-bola amin’ny asa ny halavany fanompoana. Midika izany fa raha toa ka ankehitriny, ny mpiasa voaroaka noho ny hamarinina tanjona antony, subjective na ho amin’ny ankavanana antony, ary izany no nanambara fa amin’ny alalan’ny fitsarana ho tsy voamarina, dia mety ho onitra noho ny fandoavam-bola iray vola fanampiana avy efatra amby roa-polo efa-bolana arakaraka ny taona ny asa fanompoana. Toe-javatra izay dia namela ny make-up ny toeram-piasana, na izany aza, Mbola azo ampiharina, ny make-up afa-tsy raha toa ka ny mpampiasa dia voaroaka ny mpiasan’ny fitsarana ambony manohitra ny fandroahana tsy ara-drariny, fotsiny ny taratasy iray izay ny mpiasa dia tsy maintsy mampahafantatra ny mpampiasa ny fikasany fifaninanana ny fandroahana. Ny taratasy fampakarana manohitra ny fandroahana tsy ara-drariny, dia afaka ihany koa ho voasoratra mivantana ny mpiasa, ny sendika solontena, na ny mpampanoa lalàna, araka ny hery, ary tsy maintsy ahitana mazava ary ny mazava sy ny fahavononana hanohitra ny didy navoakan’ny orinasa. Amin’ny ankehitriny ny undersigned, teraka tany sy ny mponina ao amin’ny mpiasa ity orinasa avy amin’ny serial number amin’ny fifandirana, ary mihazona ny fandroahana nampahafantarina no nampahafantarina tamin’ny ny daty ny maha-tsy ara-dalàna noho ny tsy hiteraka fotsiny, na manana ny rariny ny antony, ary na izany aza dia mifanohitra amin ny rehetra ny fitsipi-pifehezana ny lalàna sy ny fifanarahana iombonana. Amin’ny ankehitriny ny undersigned, teraka tany sy ny mponina ao amin’ny mpiasa ity orinasa avy amin’ny serial number amin’ny fifandirana, ary mihazona ny fandroahana nampahafantarina efa nampahafantatra ny daty tsy misy na inona na inona fotsiny ny antony, ary na izany aza dia mifanohitra amin ny rehetra ny fitsipi-pifehezana ny lalàna sy ny fifanarahana iombonana. Amin’ny ankehitriny ny undersigned, teraka tany sy ny mponina ao amin’ny mpiasa ity orinasa avy amin’ny serial number amin’ny fifandirana, ary mihazona ny fandroahana nampahafantarina efa nampahafantarina any amin’ny daty tsy misy voamarina ny antony, ary na izany aza dia mifanohitra amin ny rehetra ny fitsipi-pifehezana ny lalàna sy ny fifanarahana iombonana. Mba hanoratra ny taratasy facsimile ambony manohitra ny fandroahana, ny mpiasa dia mety manaraka ny endrika voalaza etsy ambony, na, ampiasaina ny fitsipika modely ny antso fandroahana: Modely ovaina Taratasy facsimile ny antso, fandroahana ny endrika izay ny mpiasa dia afaka free download, ary manangona mivantana amin’ny pc, mameno ny mpiasa angon-drakitra, ny orinasa mpampiasa, sy ny karazana fandroahana amin’ny hiteraka fotsiny, na manana ny rariny antony: Taratasy facsimile ambony manohitra ny fandroahana endrika ovaina teny. Amin’ny toe-javatra ny fandroahana, ny fanavakavahana, tohivakana foana sady foana na am-bava, ary amin’ny toe-javatra hafa ny invalidity, napetraky ny lalàna, ny lalàna vaovao ny Asa Act, dia manome ny hamerenana ireo mpiasa amin’ny asany toerana, nanome baiko ny mpitsara, ary ny fanamelohana ny orinasa noho ny fandoavana onitra, ny ambony indrindra ny dimy volana manomboka amin’ny andro fandroahana mandra-tafaverina indray izany, toy ny hita amin’ny iray hafa ny asa, raha toa ka natao tamin’ny fotoana io koa ny fandroahana, ny fandoavana ny INPS ny fandraisana anjara. Fandroahana tsy ho voamarina tanjona antony, subjective sy hiteraka fotsiny: Ao amin’ny toe-javatra voaporofo ny tsy ara-dalàna, ny mpiasa dia manan-jo hahazo onitra mifototra eo ny isan’ny taona maro izay nijanona ho amin’ny asa fanompoana miaraka amin’ny mpampiasa, ary ny tsy manaiky ny sôsialy-ny fiarovana ny fandraisana anjara. Izany tambin no ekena ho ambony indrindra ny roa volana ny karama ho an’ny taona tsirairay ny asa fanompoana. Ny kely indrindra amin’ny haben’ny ny vola fanampiana mety tsy ho latsaky ny efatra ary tsy mihoatra ny efatra amby roa-polo volana, afa-tsy ny toe-javatra manaraka ireto: Fandroahana amin’ny orinasa amin’ny latsaky ny dimy ambin’ny folo mpiasa Ho an’ny orinasa madinika latsaky ny dimy ambin’ny folo ny mpiasa, eo amin’ny raharaha unlawfulness ny fandroahana, ny tambin-karama dia ho ambony indrindra ny enim-bolana. Amin’ny toe-javatra ny fandroahana ho fanavakavahana na nahafoana izany, na dia nanambara amin’ny endrika am-bava, mampihatra ny make-up. Fiaraha-fandroahana: ao ny zava-nitranga izay misy banga ny teny sy ny fepetra napetraky ny lalàna, ny mpiasa dia manan-jo handray ny vola fanampiana avy efatra efatra amby roa-polo volana. Ao ny raharaha ny fandroahana am-bava, mampihatra ny make-up. Ny fandroahana tsy maintsy ampitaina any amin’ny mpiasa an-tsoratra amin’ny alalan’ny adiresy voasoratra taratasy voasonia avy amin’ny mpiasa na voasoratra mail hiverina amin’ny fandraisana. Ny leon’ny dia manomboka ny hamokatra ny vokany avy ny daty ny fampahafantarana ny taratasy ho an’ny mpiasa ho antsika ny mahatsiaro fa mba ho manan-kery fa ny tanjon ‘ny fomba, dia tsy maintsy atolotra eo an-tanan’ ny olona voakasika, sazy tsy admissibility ny fifandraisana. Ao amin’ny taratasy ny famaranana ny asa, ankoatra izany, ny mpampiasa dia tsy maintsy manaraka ny ara-dalàna sasany adidy, toy ny: ny Taratasy fandroahana dia misy ny antony, na, iray saro-takarina ao amin’ny Fehezan-dalàna famaizana ny Mpiasa ny Lalàna, izay mamaritra mihitsy ny fanimbana nataon’ny mpiasa iray dia ho voasazy amin’ny fandroahana. Fehezan-dalàna ity dia tokony ho namoaka ampahibemaso ao amin’ny orinasa any amin’ny toerana izay mora idirana amin’ny mpiasa rehetra. Ny antony mahatonga ny fandroahana, noho izany, dia tsy maintsy ho hita ao amin’ny taratasy, sazy ny tsy fahombiazan’ny ny fepetra, fa mety ho amin’ny endrika sary faneva toy ny, ohatra, ny mampita ny fandroahana azy fotsiny ho an’ny tolona. Ny mpiasa ao amin’ity tranga ity dia mety mitaky ny mpampiasa izay no tena antony mahatonga ny fandroahana ary hanao izay manana dimy ambin’ny folo andro ny fotoana raha mbola ny mpampiasa dia fito andro mba mamaly an-tsoratra, araka izay raha tsy misy ny fifandraisana, ny fandroahana dia mety ho fanamby. Ny fitsipi-pifehezana ady an-tsoratra ary avy hatrany ny banga ao anatin’ny fepetra voalaza amin’ny alalan’ny nasionaly iraisana asa fifanekena, ho faty ny tsy taratasim-panamarinanao ny fandroahana. Ny zava-misy ny fitsipika ny asa dia tsy maintsy voalaza ao amin’ny an-tsipiriany sy mitandrina mba hanampy ny fiarovana ny mpiasa. Toy izany famaizana asa, ary noho izany, dia tsy maintsy ampitaina sy namoaka ny mpiasa, izay efa dimy andro mba hamaly ny mpampiasa sy ny hanolotra ny antony fiarovana, amin’ny toe-javatra ity, ny mpiasa dia mety ho nanampy sy niaraka tamin’ny vondrona ny solontenan’ny. Rehefa avy nandre ny fiarovana, ary nandalo ny dimy andro farany ny fifandirana, afaka maka ny fandroahana
Ahoana no Nisara-bady: Ny fisaraham-Panambadiana fitsarana tsikelikely